Cunto-celin ah oo soo-jeedisa Luqadaha Barnaamijka ugu Fiican ee Wargelinta Macluumaadka laga soo Wareegayo Shabakadaha
Haddii aad raadineyso inaad xogta ka soo qaadato bogaga internetka oo aad rabto inaad kor u qaado ganacsigaaga. , waa inaad barataa luqadaha barnaamijyada qaarkood. Waxaa jira dhowr qalab oo loo adeegsado xogta laga soo bilaabo blogyada iyo goobaha, laakiin luuqadaha barnaamijka ayaa kuu fududeynaya inaad soo saaraan macluumaad macna leh oo aan khaldan ahayn iyada oo aanad ka tashan tayada. Helitaanka luqadda ugu fiican ee loogu talagalay shabakadda webka waa muhiim. Haddii aad hore u baratay luuqadaha barnaamijka, waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso ah uga saarto bogagga internetka.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah astaamaha luuqadda barnaamijka waa in ay lahaadaan:
Flexibility PHP waa luuqad jilicsan oo si fudud loo isticmaalo. Waqtiga fog waa barnaamijka ugu fiican ee barnaamijka oo leh faa'iidooyin badan.
Awoodda lagu dari karo macluumaadka kaydka Waa inay lahaato kartida ay ku heli karto xogta.
Wax ku oolnimada Python iyo PHP waa laba luuqadood oo barnaamijyo ah oo ku caawinaya raadinta bogaggaaga internetka iyo hagaajinta darajooyinka search engine.
Joogtaynta C ++ waa luuqad barnaamij fudud oo si fudud loo ilaaliyo oo aan u baahnayn aqoon farsamo.
Booska codka - Boggaga internetka ayaa la tuuri karaa oo kaliya marka luuqadaada barnaamijka si sahlan loo fuliyo waxayna ubaahan tahay oo kaliya dhowr lambar oo lagu doonayo in lagu bilaabo keydinta xogta .
Qiyaasta HTML waa luuqad dhamaystiran oo bixisa xog badan oo isdifaac ah. Waxay kaa caawineysaa inaad xoqdo dukumiintiyada HTML oo aad isla markiiba hesho natiijooyinka aad rabto.
Luqadaha barnaamijka ugu fiican ee loogu talagalay soocista webka iyo saarista xogta:
Barta. js waa ay ku fiican tahay bogagga shabakadaha iyo blogs-ka waxayna isticmaalaan xeerar firfircoon si aad u hesho shaqooyinkaaga. Luqaddan waxaa lagula talinayaa bogagga internetka ee waaweyn iyo mashaariicda wax soo saarka.
C iyo C ++:
C iyo C + + waa laba luqadood oo caan ah oo barnaamijka caan ah oo loogu talagalay daabacaadda webka. Waxay u fiican yihiin ganacsiyada yaryar iyo blogyada cusub. Laakiin haddii aad rabto in aad rogrogto boggaga internetka ee firfircoon, waa inaadan doorin C iyo C ++.
PHP waa mid ka mid ah luuqadaha barnaamijka ugu caansan iyo la yaabka leh ee soo saaridda xogta. Waxay ku habboon tahay ganacsiyada iyo barnaamijyadaba, laakiin taageerada daciifka ah ee badan ee xadhiggu waa cilladda ugu weyn. Sidaas darteed, PHP kuma habboona mashaariicda waxsoosaarka adag.
Python waxay u egtahay guud ahaan wareegga iyo waliba nidaamyada websaydhka iyo habka saarista xogta si habboon. Bariiska qurxinta iyo Dareemka waa laba qaab oo caan ah oo ku salaysan Python.
Luuqadda ugu fiican ee barnaamijka loogu talagalay qulqulka webka:
PHP waa luuqad tarjumadeed oo tarjumaysan, mana ubaahnid inaad xasuusato habka adag ee loo adeegsado. Waa luuqad wax ku ool ah oo ku taal barta shabakadda taasoo hubisa natiijooyinka tayada. PHP wuxuu kuu fududeynayaa inaad xoqdo bogagga internetka ee firfircoon iyo inaad hesho macluumaad faa'iido leh marnaba.
Marka aad ka ogaato dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xun ee dhammaan barnaamijyada luqadaha, waxay sahlanaan doontaa in la xoqdo xogta laga helo bogagga asaasiga ah iyo kuwa sare. Iyada oo la adeegsanayo PHP, waxaad si fudud u xoqin kartaa portals safarka, goobaha e-ganacsiga, wargeysyada iyo barta gaarka loo leeyahay. Luqaddani ma aha oo keliya xakameysa xogta la barbardhigi karo laakiin waxay sidoo kale garaacdaa goobtaada waxayna hagaajineysaa qiimeynta mashiinka raadinta Source .